Pay Pal button ​လုပ်​ရ​ခြင်း​အ​ကြောင်း​ရင်း ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Pay Pal button ​လုပ်​ရ​ခြင်း​အ​ကြောင်း​ရင်း
​ကျွန်​တော် ​လတ်​တ​လော ​ဝဘ်​ဆိုက် ၃ ​ခု​ကို ​တာ​ဝန်​ခံ​ပြီး​လုပ်​ပေး​နေ​ပါ​တယ်. ​လုပ်​ပေး​ရ​တာ ​အ​ခက်​အ​ခဲ​မ​ရှိ​ပေ​မယ့် ​ပိုက်​ဆံ​လွှဲ​တဲ့​အ​ခါ​ကျ​ရင် ​အ​ရမ်း​ဒု​က္ခ​ရောက်​ပါ​တယ်. ​နော်​ဝေး​က ​ကို​စော​ကျော်​ဦး ​ဝဘ်​ဆိုက်​ကို ​လုပ်​ပေး​လို့ ​သူ​ငွေ​ပို့​တဲ့​အ​ခါ​မှာ ​ထိုင်း​ဘဏ်​က​နေ ​တစ်​ခါ​ပို့​ရင် ​ဘတ်(၉၀၀) ​ဖြတ်​ပါ​တယ်. ​ဘယ်​လောက်​ပဲ ​ပို့​ပို့​ပါ. ​ဘတ် ၃၀၀​ဝ ​ပို့​တာ ​ဘတ်(၉၀၀)​ဖြတ်​တော့ ​ဘယ်​မှာ ​ကျန်​ပါ​တော့​မ​လဲ​ဗျာ. ​အဲ့​ဒါ​နဲ့ paypal ​က​နေ ​ငွေ​လွှဲ​လို့​ရ​အောင် ​လုပ်​လိုက်​ရ​တာ​ပါ. ​ပြီး​တော့ ​တစ်​ချို့​က ​ဝဘ်​ဆိုက်​အ​တွက် ​တတ်​နိုင်​သ​လောက်​လေး ​လှူ​ချင်​ပါ​တယ်​လို့ ​ပြော​ပါ​တယ်. ​နာ​မည်​တွေ ​ထည့်​မ​ပြော​ပါ​နဲ့​ဆို​လို့ ​နာ​မည်​မ​ဖော်​ပြ​တော့​ပါ​ဘူး. ​အဲ့​တော့ ​ကျွန်​တော် ​မှာ ​အ​ချက်​နှစ်​ချက်​ပဲ ​ရှိ​ပါ​တယ်. ​အ​ခု​ကျွန်​တော် ​ဝဘ်​ဆိုက်​တွေ​ကို​လည်း ​လက်​ခံ​ပြီး ​ရေး​ပေး​နေ​ပါ​ပြီ. ​အဲ့​အ​တွက် ​ဘဏ်​က​နေ ​ငွေ​လွှဲ​စ​ရာ​မ​လို​ပါ​ဘူး . ​ကျွန်​တော့် paypal account ​ထဲ​ကို ​ငွေ​လွှဲ​ပို့​ပေး ​ရင်​ရ​ပါ​ပြီ.
Proxy ​ဝယ်​ချင်​သူ​များ၊ ​နိုင်​ငံ​ခြား​က​နေ ​ဝဘ်​ဆိုက်​အပ်​လုပ်​ချင်​သူ​များ ​အ​တွက် ​အ​လွယ်​တ​ကူ ​ငွေ​လွှဲ​လို့ ​ရ​အောင်​လို့ ​လုပ်​ထား​တာ​ပါ ​ပြီး​တော့
www.nyinaymin.com ​လို​မျိုး​မ​ဖြစ်​ရ​အောင် ​ဝဘ်​ဆိုက်​ဆက်​ပြီး ​ရှင်​သန်​ဖို့ ​ကျွန်​တော်​တို့ ​နိုင်​သ​လောက် ​အ​ကူ​အ​ညီ​ပေး​ချင်​ပါ​တယ်​ဆို​တဲ့ ​နိုင်​ငံ​ခြား​က ​ညီ​အစ်​ကို​များ​အ​တွက်. ​ဒီ​နှစ်​ချက်​နဲ့ paypal button ​ကို ​လုပ်​ဖြစ်​သွား​တာ​ပါ.
​ဝဘ်​ဆိုက် ​အပ်​ချင်​သူ​များ nyinaymin.org@gmail.com ​ကို ​ဆက်​သွယ်​စုံ​စမ်း​မေး​မြန်း​နိုင်​ပါ​တယ်. ​လို​ချင်​တဲ့ Design၊ website ​အ​မျိုး​အ​စား​နဲ့ ​ထည့်​ချင်​တဲ့ ​အ​ချက်​အ​လက်​တွေ​ကို​တော့ ​မေးလ်​နဲ့​ပို့​ပေး​ဖို့ ​လို​အပ်​ပါ​တယ်. ​ဝဘ်​ဆိုက်​ကို ​အ​ဆင်​လဲ​ပြေ ​ဈေး​နှုန်း​လဲ ​ချို​သာ​အောင်​လို့ ​အ​နည်း​ဆုံး​ဈေး​နဲ့ ​ရေး​ပေး​နေ​ပါ​တယ်. ​အား​လုံး​ကို ​အ​ထူး​ပဲ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်.
Saw Kyaw October 13, 2011 at 12:18 AM
​သိပ်​ပြီး ​ကောင်း​တဲ့ ​အ​စီ​အ​စဉ်​တ​ခု​ပါ။ ​အ​လုပ်​အပ်​ချင်​သူ​များ​အ​တွက်​ရော ​ပ​ညာ​ကို​လေး​စား​တဲ့​အ​နေ​နဲ့
​ကူ​ညီ​ချင်​နေ​ကြ​သူ​များ ​အား​လုံး​အ​တွက် ​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​တာ​ပေါ့။ ​နောက်​ပြီး ​မား​သား​ဘုတ် ​လောင်​တုံး
​က​လို ​ရပ်​ထား​ရ​တာ​မျိုး ​အ​ရင်​ဆိုက်​အ​ဟောင်း​က ​လို​ငွေ​အ​ခက်​အ​ခံ​ကြောင့် ​ဖြစ်​သွား​ရ​တဲ့ ​အ​ဖြစ်
​အ​ချိုင်း October 13, 2011 at 12:59 AM
​အ​ကို​တို့​အ​ရမ်း​ဝမ်း​သာ​ပါ​တယ်
​မြန်​မာ​ပြည်​မှာ ​သင်​တန်း​တွေ ​ကော ​မ​ဖွင့်​သေး​ဘူး​လား​ညီ
​အ​ကို​တို့​လေ့​လာ​အား​ပေး​မှာ​ပါ ​လာ​ရောက်​သင်​တန်း​တက်​ချင်​ပါ​တယ် ​နည်း​ပ​ညာ​လက်​ပူး​လက်​ကျ​သင်​ယူ​ချင်​ပါ​တယ် ​ညီ​လေး​ရေ ​အ​ကို​တို့ ​က​တော့ ​သိပ်​လေး​စား​တယ် ​သိပ်​အား​ကျ​တယ်
hone thar October 13, 2011 at 11:22 AM
​သား​သား October 17, 2011 at 1:42 PM
​ရဲ​ထွန်း October 19, 2011 at 2:40 PM
​လှည့်​ကြည့်​လိုက်......၊​သား​သား​နဲ့ ​အ​တူ​ကျ​နော်​ဒို့ ​လဲ​ရှိ​တယ်(​ရဲ​ထွန်း)
welcome October 23, 2011 at 9:30 PM
​အား​ပေး​ပါ​တယ်​ဗျာ။ ​ကို​ညီ​နေ​မင်း​တို့​လို​လူ​မျိုး​တွေ ​မြန်​မာ​ပြည်​မှာ ​အ​များ​ကြီး​ရှိ​သင့်​ပါ​တယ်။ ​ထူး​ခြား​တဲ့​ဖြစ်​ရပ်​တွေ​ရှိ​ရင်​လည်း ​ဆိုက်​ပေါ်​မှာ​ရေး​ထား​ပေး​ပါ​နော်။ ​ကူ​ညီ​ချင်​ပါ​တယ်။ ​ကျွန်​တော်​တော့ pay pal ​မ​ရှိ​သေး​ဘူး။
​လေး​စား​လျှက်၊ ​ကျော်၊ ​စ​င်္ကာ​ပူ
thuya July 18, 2012 at 8:36 PM
​အစ်​ကို ​ညီ​နေ​မင်း ​ခင်​ဗျာ
paypal ​က us sanction ​ကြောင့် ​မြန်​မာ​ပြည်​ကို ​ပိတ်​ထား​တယ်​လို့ ​သိ​ရ​ပါ​တယ်။​ကျွန်​တော် ​က ​မော်​တော်​ဆိုင်​ကယ် accident ​ဖြစ်​ပြီး ​ခြေ​ထောက်​ကျိုး ​ထား​တာ​ကြောင့် ​ခြေ ​ထောက် ​မ​သန်​တော့​ပါ​ဘူး။​အဲ​ဒါ​ကြောင့် ​အိမ်​နေ​ရင်း online ​က​ဝင်​ငွေ​ရှာ​လို့ ​ရ​တဲ့ ​အ​လုပ်​တွေ​ရှာ​နေ​တာ​ပါ။
paypal ​အ​ကောင့်​လုပ်​ပုံ​လုပ်​နည်း​နှင့် verified ​လုပ်​နည်း withdraw ​လုပ်​နည်း ​များ​ရှိ​ရင်​သိ​ချင်​ပါ​တယ်။